ဓမ္မဆောင်းပါးများ | Ashin Kelatha Vihara
Category Archives: ဓမ္မဆောင်းပါးများ
“ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းကင်းအောင် ဆင်းရဲခပ်သိမ်းကင်းအောင်လို့ အားထုတ်ရတာ၊ အားထုတ်လို့ တရားပြည့်စုံပြီဆိုတော့ စိတ်လည်းပဲ ကောင်းသွားတယ်၊ တရားမပြည့်စုံရင် စိတ်ကိုက တယ်မကောင်းဘူး၊ ကိုယ့်အကျိုးတွေကိုကြည့်ပြီး သူများအကျိုးမဲ့တွေကို ကြံလိုက် စည်လိုက် စိတ်ကူးလိုက် ပြောဆိုလိုက် အဲဒီလို မတော်မသင့်တာတွေကို လုပ်တတ်တယ်၊ တရားပြည့်စုံရင်တော့ အပြစ်တွေ့ရင်တောင်မှ သူ့အပြစ်နဲ့ သူပဲဆိုပြီး သူများအပြစ်ကို မပြောပဲ လျစ်လျူရှုနိုင်တယ်။ သူများတွေ ဒုက္ခရောက်အောင်တော့ မပြောဘူး၊ အဲဒီတော့ စိတ်တွေလဲကောင်း၊ ကိလေသာတွေလည်း ကင်းတန်သလောက် ကင်းသွားတယ်။တော်တော် နေရာကျပါတယ်။၊ မတော်မသင့်တဲ့ အမှုတွေလည်း အဲဒီတော့ ကင်းသွားတာပဲ။ ဒါကြောင့် တရားပြည့်စုံအောင် ရိုရိုသေသေ တရားကို အားထုတ်ကြဖို့ အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။ တရားမပြည့်စုံသေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း တိုးတက်အောင် အချိန်ရသလောက် အားထုတ်ရမယ်။ ” (မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး)
These are the five benefits whichaMonk gains for making upaKathina robe after the rains retreat: Once the Robe is made up:
(1) A Bhikkhu does not need to seek permission (From the chief monk or community of monks he lives with) before visitingahouse in order to receive alms (or do anything).
(2) It is not necessary to take all three robes when going anywhere (including) toahouse to ask for something. (Such as medicine, alms etc)
(3) A group meal: A Monk can accept an invitation forameal even if invitation is not made incorrect formal invitation speech.
(4) A Monk can keepalot of robes during Kathina privileges time . (Five months after Kathina robe is made).
(5) A Bhikkhu who has Kathina privileges can use any material/robes offered to the Sangha.
(1) One who offers Kathina Robe could go everywhere without obstacle.
(2) He or she doesn’t have heavy burden or difficulty with her duties.
(4) She or he can keep material things without fear for loss.
(5) His belongings cannot be robbed or stolen by someone.
ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာ (ပ၊၂၂၅) ၌ ““ဘုရားရှင်နှင့် သက်တူရွယ်တူလည်းဖြစ်၊ အလွန်လည်းအကျွမ်းဝင်သော ပသေနဒီ ကောသလမင်းကြီးသည် (နောက်ဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သော) ဘုရားရှင်ထံ အဖူး မြော်သွားရောက်ခဲ့ရာတွင် “အလွန် အလေးပြုအပ်၊ ရိုသေအပ်သော မြတ်စွာ ဘုရား၏အထံတော်သို့ ပြန့်လွင့်သော သဘောရှိသော မင်း၏အသွင်အပြင်ဖြင့် မသွားသင့်”ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခြေနင်းနှင့်တကွသော မင်းမြောက် တန်ဆာငါးပါးတို့ကို (ဗန္ဓုလစစ်သေနာ ပတိ၏တူ) ဒီဃကာရာယန စစ်သေနာပတိအား ပေးအပ်ခဲ့၍ ဂန္ဓကုဋီကျောင်းတော်သို့ ၀င်ရောက်ဖူးမြော်၏””ဟု လာ ရှိပေသည်။ဤသို့ ခတ္တိယဇာတ်ဖြစ်သော ဘုရားရှင်လက်ထက်က မင်းများပင် ကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ ဖိနပ်မစီးကြကြောင်း တွေ့ရှိရပေ၏။
ဆရာတော် ။ ။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒကာကြီးမှာ ဘုရားကို ရိုသေတဲ့ကုသိုလ်စိတ် ကိန်းအောင်းနေတုန်းဆိုရင် ဘုရားဝင်း ထဲရောက်ရောက်၊မရောက်ရောက် ဘုရား မြင်တဲ့နေရာကစပြီး ဖိနပ်ချွတ်ရမယ်။ ဘုရားကို မထေလေးစားပြုချင်တဲ့စိတ်၊ အကုသိုလ်စိတ်ကိန်းအောင်းနေရင်ဘုရား ၀င်းထဲမှာသာ မကဘူး။ ဘုရားပလ္လင်ပေါ်ထိ ဖိနပ်စီးရဲမှာပဲ။
(၁၊၂၊၃၊) ဘုရားပွင့်နေဆဲ ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ အပါယ်သုံးဘုံ၌ ဖြစ်ရသူများ ( အသူရကာယ်ကို ပြိတ္တာဘုံ၌ သွင်းယူရသည်။)
(၄) အသက်ရှည်သော နတ်ဗြဟ္မာများ ( ဘုရားပွင့်ဆဲအခါ လွန်စွာအသက်ရှည်ကြ၍ ဘုရားရှင်ကို မဖူးတွေ့နိုင်သော အသညသတ်ဗြဟ္မာနှင့် အရူပဗြဟ္မာတို့ဖြစ်သည်။)
(၅) ဘုရားရှင်နှင့် ရဟန်းသံဃာတော်များ မရောက်နိုင်သော အစွန်အဖျား တောကြို တောင်ကြားအရပ် (ပစ္စန္တရစ်)။
(၆) ဘုရားပွင့်ဆဲ သာသနာတော်တည်ဆဲအခါ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူရှိသူများ။
(၇) တရားတော်ကို နားလည်လောက်သော ဉာဏ်မရှိသူများ။
(၈) တရားတော်ကို တတ်သိနားလည်သောဉာဏ်ရှိသော်လည်း ဘုရားသာသနာမရှိသောအခါ လူဖြစ်ရသူများ။
၁။ မင်းဆိုး မင်းယုတ် အုပ်စိုးသည့်ကာလ၌ ဖြစ်ရခြင်း (ကာလ၀ိပတ္တိ)။
၂။ အပါယ်လေးဘုံ၌ ဖြစ်ရခြင်း ( ဂတိဝိပတ္တိ)။
၃။ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါ (ဥပဓိရုပ်) ချို့တဲ့ခြင်း (ဥပဓိဝိပတ္တိ)။
၄။ မှန်ကန်သော ကြိုးစားအားထုတ်မှု မရှိခြင်း (ပယောပ၀ိပတ္တိ)။
၁။ ဆွေမျိုးများ ပျက်စီးခြင်း (ဉာတိဗျသန)။
၂။ စီးပွားဥစ္စာ ပျက်စီးခြင်း ( ဘောဂဗျသန)။
၃။ အနာရောဂါဖြစ်၍ ပျက်စီးခြင်း (ရောဂဗျသန)။
၄။ မှားသောအယူ ယူမိသဖြင့် အယူမှန် ပျက်စီးခြင်း (ဒိဋ္ဌိဗျသန)။
၅။ ကိုယ်ကျင့်သီလ ပျက်စီးခြင်း ( သီလဗျသန)။
မဟာစည်ဆရာတော်၏ ပရိယတ်အရည်အသွေးကို မဟာစည်ဆရာတော်ကဲ့သို့ ပရိယတ်အရည်အသွေး ရှိသူကသာ အကုန်အစင် သိမြင်နိုင်ပေမည်။ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ညောင်ရမ်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးရေဝတ၊ ဥက္ကဋ္ဌ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသူရိယာဘိဝံသ၊ သပြေကန်ဆရာတော် ဦးဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ၊ အနီးစခန်းဆရာတော် ဦးဉာနုတ္တရ၊ ဝိဇ္ဇာလင်္ကာရဆရာတော် ဦးဝိသုဒ္ဓါဘိဝံသ၊ ပခုက္ကူမဟာဝိသုတာရာမတိုက် ဆရာတော်ကြီးများ၊ မင်းကွန်းတိပိဋကဆရာတော်၊ အစရှိသည့် အဋ္ဌကထာ ဋီကာနှင့်တကွ ပိဋကတ်သုံးပုံကျွမ်းကျင် နှံ့စပ်တော်မူသော ဥဇုဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသည့် ဆရာမြတ်တို့ကသာ မဟာစည်ဆရာတော်၏ အရည်အသွေးကို သိမြင်လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ သိမြင်သည့်အတိုင်းလည်း ချီးကျူးလေးစား ကြသည်သာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မဟာစည်ဆရာတော်၏ မြင့်မားသော ပရိယတ်အရည်အသွေးသည် မချွတ်ဧကန် အမှန်ရှိသော ဂုဏ်တစ်ပါး ဖြစ်သောကြောင့်ပင်တည်း။
၁။ ကောင်းမြတ်သောအရာတို့ကို ကျင့်ခြင်းငှါ စွမ်းနိုင်ရမည်။
၃။ တရံတခါမျှ ကွေ့ကောက်ခြင်းမရှိဘဲ ကောင်းကောင်းကြီး ဖြောင့်မတ်ရမည်။
၄။ ပညာရှိတို့ ကောင်းစွာ ဆုံးမလွယ်သူ ဖြစ်ရမည်။
၅။ ကောင်းမြတ်သောအရာတို့၌ နူးညံ့ပြော့ပျောင်းသောသူ ဖြစ်ရမည်။
၆။ မာန်မာန တက်ကြွခြင်း မရှိစေရ။
၇။ မိမိမှာ ထင်ရှားရရှိသော ပစ္စည်းဖြင့်သာ ရောင့်ရဲတင်းတိမ် ကျေနပ်သောသူ ဖြစ်ရမည်။
၈။ သူတပါးတို့ စောင့်ရှောက်မွေးမြူရန်(ပြုစုရန်) လွယ်ကူသောသူ (ကြေးမများသူ) ဖြစ်ရမည်။
၉။ ကျင့်ဝတ်တရားအတွက် မလိုလားအပ်သည့် အပိုကိစ္စများ နည်းပါးသောသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၀။ ပေါ့ပါးလွယ်ကူသော အသက်မွေးခြင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၁။ ငြိမ်သက်တည်ကြည်သော ဣနြေ္ဒရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၂။ အပြစ်ကင်းသောအရာတို့၌ ရင့်ကျက်သော=ကောင်းစွာသိမြင်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသော ဥာဏ်ပညာရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၁၃။ ကိုယ် နှုတ် နှလုံး သုံးပါးလုံး ကြမ်းကြုတ်ခြင်း မရှိစေရ။
၁၄။ ဒါယကာ၊ဒါယိကာမတို့အပေါ်မှာ(ရဟန်းတော်များအတွက်ဆိုလိုသည်) တွယ်တာကပ်ငြိခြင်း မရှိစေရ။
(လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆိုလျှင်- အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများအပေါ်မှာ တွယ်တာကပ်ငြိခြင်း မရှိစေရ။
၁၅။ ပညာရှိများ စွပ်စွဲကဲ့ရဲ့မည့် အရာမှန်လျှင် တစုံတရာ အနည်းငယ်ကိုမျှ မပြုကျင့်ရ။